२०७१ फागुन १६ गते शनिवार
२०७१ फागुन १६ गते शनिवार को प्रतीक दैनिक पढ्नुहोस
सशस्त्रद्वारा स्वाइनफ्लुबारे जनचेतना कार्यक्रम
प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ सशस्त्र प्रहरी बिओपी अलौंले सरुवा रोग स्वाइनफ्लुबारे आज जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । भारतमा महामारीको रूपमा देखा परेको स्वाइनफ्लुबारे नेपाल सरकारले सीमा क्षेत्रका सबै निकायलाई चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएपश्चात् सशस्त्र प्रहरीले आजदेखि अभियानको रूपमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक भीमबहादुर थापाले बताए । जिल्लास्थित सबै बिओपीले मातहत क्षेत्रका सार्वजनिक ठाउँ हाटबजार, विद्यालय, चौक, चौराहा आदिमा स्वाइनफ्लु रोकथामबारे जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सप्रउ थापाले बताए । सशस्त्र प्रहरी बिओपी अलौंले शुक्रवार ड्राइपोर्ट चोक तथा अलौंस्थित गुरुकुल इ·लिश बोर्डिङ स्कूलमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सप्रनि मोहन देवकोटाले बताए । सो अवसरमा स्वाइनफ्लुको शड्ढा लागेमा तत्काल स्वास्थ्य चौकी पुगी जचाउने, भीडभाडमा नहिंड्ने, हात नमिलाउने तथा मास्क लगाएर सार्वजनिक ठाउँमा हिंड्डुल गर्न जानकारी गराइएको सप्रनि देवकोटाले बताए ।
जोखिमपूर्ण स्थानमा विद्यालय
रामेश्वर मेहता, सिम्रौनगढ, १५ फागुन/ सिम्रौनगढ क्षेत्र अन्तर्गतका तीनवटा विद्यालयका छात्रछात्राहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा विद्यालय गइरहेका गाउँलेहरूले बताएका छन् । विद्यालयसँगै पोखरी र सडक रहेकाले जोखिम देखिएको हो । यस सम्बन्धमा सिम्रौनगढ–९ सतुवाईस्थित नेराप्रावि, वडा नं. ६ स्थित नेराप्रावि सानो इटवाल, सोही वडाको कनकपुरस्थित नेराप्रावि गरी तीनवटा विद्यालय पोखरीको डिलमा रहेको र उक्त विद्यालयहरूको वरिपरि पखोलसमेत नभएको कारण त्यहाँका बालबालिकाहरू जोखिपूर्ण अवस्थामा रहेका अभिभावकहरूले बताएका छन् । विद्यालयसँगै जोडिएर रहेका पोखरीहरूमध्ये सानो इटवालको पोखरी सार्वजनिक हो भने अन्य दुई स्थानको पोखरी निजी हो । उक्त पोखरीहरूमा माछापालन भइरहेकाले बाह्रै महिना पानी रहने गरेको कनकपुर प्राविका प्रधानाध्यापक जिक्रुलाहा अन्सारीले बताए । कतिपय विद्यालयको एकातर्फ पोखरी र अर्कोतर्फ सडक रहेको कारण स्थानाभावले गर्दा पर्खाल निर्माणको कुनै योजना नभएको शिक्षकहरूले बताएका छन् । बालबालिकाको लागि अनुपयुक्त स्थानमा विद्यालय निर्माण किन भयो ? खोजको विषय रहेको अभिभावकहरूको भनाइ छ ।
पलिस्था ब्याडमिन्टनमा शनिवार सेमिफाइनल र फाइनल
प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ वीरगंज जेसीजले आयोजना गरेको पलिस्था स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको क्वार्टरफाइनलमा पुरुष एकलतर्फ माउन्ट एठमन्ड, कञ्चनजङ्घा, गौतम मावि र ज्ञानज्योति पुगेका छन् । भोलिको सेमिफाइनलमा माउन्ट एडमन्ड र कञ्चनजङ्घा तथा गौतम र ज्ञानज्योति भिड्नेछन् । यसैगरी महिला एकलतर्फ गौतम मावि र माउन्ट एडमन्ड तथा कादम्बरी र कञ्चनजङ्घा भिड्नेछन् । मिक्स डबलमा कञ्चनजङ्घा र कादम्बरी तथा न्यू वेभ र गौतम मावि भिड्ने प्रमुख प्रशिक्षक अमित श्रेष्ठले बताए । टिम इभेन्ट्सतर्फ बाँकी रहेको क्वार्टरफाइनल खेलमा भोलि गौतम र न्यू वेभ भिड्नेछन् । यसमा विजयी टिमले विद्यासदनसँग सेमिफाइनल खेल्नेछ । त्यस्तै टिम इभेन्ट्सतर्फ भोलि कञ्चनजङ्घा र मेरीगोल्ड तथा डिएभी र माउन्ट एडमन्ड सेमिफाइनलमा भिड्नेछन् । भोलि बिहान ८ बजेदेखि सेमिफाइनल र फाइनल खेलहरू हुने प्रशिक्षकद्वय प्रेम महतो र राजकिशोरले बताए । भोलि ४ बजे प्रतियोगिता समापन हुने आयोजक समितिले जनाएको छ ।
उमाशङ्कर द्विवेदी स्वप्नावस्थामा नै कर्णले सोधे–“भगवन्, तपाईंले मप्रति अत्यन्त स्नेह देखाउँदै मलाई यस प्रकारको उपदेश दिंदै हुनुहुन्छ । यदि तपाईंको इच्छा भए मलाई बताउनुहोस्, यस ब्राह्मण भेषमा तपाईं को हुनुहुन्छ ?” सूर्यले भने– “बाबु, म सूर्य हुँ र तिमीलाई स्नेहवश भएर नै यस्तो सम्मति दिंदैछु । तिमीले मेरो कुरा मानेर यस कवच–कुण्डलको रक्षा गर, यसमा नै तिम्रो विशेष कल्याण हुनेछ ।” कर्णले भने– “जब भगवान् भास्कर स्वयम्ले मलाई मेरो हितको उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो परम कल्याण हुने कुरा त निश्चित नै हुने भयो, तर तपाईंले मेरो कुरा सुन्ने कृपा अवश्य गर्नुहोस् । तपाईं वरदायक देव हुनुहुन्छ, तपाईंलाई प्रसन्न राख्दै म प्रेमपूर्वक यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि यदि तपाईंले मलाई माया गर्नुहुन्छ भने मलाई मेरो व्रतबाट विचलित नगर्नुहोस् । सूर्यदेव, संसारभरिका जम्मैजनालाई यो कुरा थाहा छ कि म श्रेष्ठ ब्राह्मणहरूले मागेको खण्डमा आफ्नो प्राण पनि अर्पण गर्न सक्छु । यदि देवश्रेष्ठ इन्द्रले पाण्डवहरूको हितका लागि ब्राह्मण भेष धारण गरेर आई मसित भिक्षा माग्न आए भने म उनलाई आफ्नो यो दिव्य कवच र कुण्डल सहर्ष अवश्य नै
प्रतिश्याय र आयुर्वेद उपचार
डा. रमेश मिश्र हाम्रो खानपान, रहनसहन तथा मौसममा हुने परिवर्तनले हामीलाई धेरै रोग लाग्छ । तीमध्ये प्रतिश्याय पनि एक हो । प्रतिश्यायलाई आम बोलीचालीको भाषामा रुघाखोकी भनिन्छ । आधुनिक व्याख्या अनुसार राइनाइटिस त्यस अवस्थालाई भनिन्छ, जसमा नासागत श्लेष्मकलामा तीव्र उपसर्ग पुगेर कला पूर्णरूपले रक्ताधिक्ययुक्त एवं रातो हुन्छ र ग्रन्थि उद्देचनको क्रिया बढ्छ । परिणामस्वरूप अत्यधिक स्राव नाकबाट हुन थाल्छ । प्रतिश्याय रोग हुनुको दुईवटा कारण छन्– प्रथम, सद्योजनक र दोस्रो, कालाज्वरजनक वा चयादिक्रमजनित निदान । ऋतुमा विषमता, धुलो, धुवाँ, मलमूत्रको वेगलाई रोक्नु, अजीर्ण अत्यधिक भाषण गर्नु, क्रोध, शिरोमिताप, रात्रि जागरण, दिवा शयन, जलको अधिक प्रयोग, शीत लाग्नु, ओस, तुसार वा बरफको चिसासे लाग्नु, अश्रुपात यी कारणहरूले गर्दा प्रतिश्याय हुन्छ । जब शरीरमा भएका वात, पित, कफ दोषहरू एक–एक गरेर वा सबै मिलेर शिरमा सञ्चित भएर साथै शिरमा रक्त सञ्चित भएर क्रोधादि कारणबाट प्रकोप भएर प्रतिश्याय रोग उत्पन्न हुन्छ । प्रतिश्याय रोग लाग्न शुरू हुँदा नाकबाट सुरसुराहट (त्ष्अपष्लिन), हाछ्यूँ आउनु (क्ष्च
तराई–मधेसको भूगोल र सङ्घीयता
चन्द्रकिशोर यतिखेर मुलुकमा सङ्घीयताको बहसले ठूलो आकार लिंदै गएको छ । प्राय:जसो सबै राजनीतिक दलले सङ्घीयताको पक्षमा मत जाहेर गरिसकेका छन् । संविधानसभाले पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यसै सन्दर्भमा तराई–मधेसको भूगोल केन्द्रित सङ्घीयताका विभिन्न स्वरूपहरू अवधारणागतरूपमा आइरहेका छन् । तर यी सबै अवधारणाहरू यहाँका जनतालाई लक्षित गरी मात्र प्रक्षेपण गरिएको छ, तराई–मधेसको भूगोललाई लिएर गरिएको पाइँदैन । यस क्षेत्रको पर्यावरणीय स्तरमा जुन र्‍हास आइरहेको छ तथा प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग र संरक्षण तथा जीविकोपार्जनको सुनिश्चतताका लागि गरिनुपर्ने कार्यनीतिको बारेमा बहस उठान भइरहेको छैन । केवल बासिन्दालाई मात्र लक्षित गरियो र भूगोललाई उपेक्षा गरियो भने यसले धेरै चुनौतीहरू खडा गर्न सक्छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मधेसको भावी प्रगति र अस्तित्वलाई चुनौती दिंदै छ । मूलत: यतिखेर भूगोलले पनि लोकतन्त्रको माग गरेको छ । मधेसका जनताले जल, जमिन र जङ्गलको कुरा गरे तापनि जलवायु परिवर्तनसँग सरोकार राख्ने विषयमा छलफल गरिराखेको पाइन्न । वातावरणीय असन्तुलनले तराईमा उत्पन्न
परिवर्तन रहर होइन, समाज विकासको आवश्यकता हो
वैद्यनाथ ठाकुर नेपालीहरू यति बेला राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेका छन् । नेपालको राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक परिपाटी परिवर्तनको सङ्घारमा छन् । कुनै पनि देशमा आर्थिक प्रणाली बदलिए सँगसँगै राजनीति तथा समाजसमेत बदलिरहेको हुन्छ । सतही ढ·बाट हेर्दा देशको राजनीतिले नै सबै राम्रो–नराम्रो कुराको फैसला गर्ने गर्छ । तर यो आंशिक सत्यमात्रै हो । पूर्ण सत्य भनेको आर्थिक प्रणाली अनुसारकै राजनीतिक प्रणाली तथा सामाजिक रीतिरिवाज विकसित भइरहेको हुन्छ । मानव समाजमा शुरूदेखि नै आर्थिक प्रणालीले नै राजनीति र सामाजिक संस्कारलाई निरूपण गर्दै आएको छ । ज·ली अवस्थाका सामूहिक आर्थिक उत्पादन प्रणालीले कबिलायी राजनीति र सामूहिक समाजलाई विकास गरेको देखिन्छ । ज·ली अवस्थाको गर्भ, विभिन्न कबिलाहरूबीचको लडाइँ र इलाका कब्जाको नीतिले शत्रुपक्षको हारमा मान्छेसमेतलाई विभिन्न कार्यमा प्रयोग गर्न दासको रूपमा राख्न थालेको देखिन्छ । दास र मालिकबीचको उत्पादन सम्बन्ध जो पूर्वमा सामूहिक थियो, त्यसलाई व्यक्तिमा केन्द्रित गर्दै लैजान्छ । फलस्वरूप ज·ली अवस्थाको सामूहिक उत्पादन प्रणाली समाप
वर्तमान सरकार नागरिकको शान्ति सुरक्षाप्रति संवेदनशील देखिंदैन । विगतको तुलनामा मुलुकको वातावरण निकै शान्त छ । तर त्यो सरकारी प्रयासले शान्त भएको होइन । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा सशस्त्र भूमिगत क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका समूहहरू शान्त बसेका छन् । सरकारविरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्न खोज्ने अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई जनताले साथ दिएका छैनन् । संविधान निर्माणमा देखिएका विवादबाहेक सरकार सञ्चालन तथा सरकारका नियमित कामकार्यवाही सञ्चालनका लागि अहिले खासै अवरोध छैन । जुनसुकै अवस्थामा रहे पनि नागरिकको शान्ति सुरक्षा र अमनचैन राज्यको पहिलो दायित्व हो । गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र शान्ति सुरक्षा राज्यको दायित्व भएपनि सबैभन्दा प्रमुख दायित्व शान्ति सुरक्षा हो । समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम भएमात्र अन्य सेवा प्रदान तथा उपभोगमा सहज हुन्छ । मुलुकमा अपराधका नयाँ–नयाँ तरिका र क्रुर शैलीहरू भित्रिरहेका छन् । विद्यालन जाने बालिकालाई तेजाब छ्याप्ने जस्तो क्रुर घटना अन्य मुलुकमा बेलाबखत हुने गरेको समाचार आउने गथ्र्यो । विदेशी क्रुरताको सिको गर्दै संवेदनशील क्षेत्र मुलुकको राजधानीमा दुई किशोरीमाथ
२०७१ फागुन १५ गते शुक्रवार
२०७१ फागुन १५ गते शुक्रवार को प्रतीक दैनिक पढ्नुहोस
२०७१ फागुन १४ गते बिहीवार
२०७१ फागुन १४ गते बिहीवार को प्रतीक दैनिक पढ्नुहोस
पर्साको उखु : वारि छि:छि:, पारि वाहवाह
प्रस, वीरगंज, १४ फागुन/ पर्सा जिल्लाको उखु अहिले भारत निकासी हुन थालेपछि उखु किसान हर्षित भएका छन् । बाराको रिलायन्स सुगर मिलले गत वर्ष गरेको लिखित सम्झौता विपरीत उखु खरिद गर्न ढिलाइ गरेको अवस्थामा आन्दोलित पर्साका किसानहरूको उखु सीमावर्ती भारतको विभिन्न चिनी मिलहरूले लिन शुरु गरेपछि किसान हर्षित भएका हुन् । पर्सा जिल्लामा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष दोब्बर उखु खेती भएको उखु किसान सङ्घर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष शहरुम राउत गद्दी बताउँछन् । गत वर्ष ६ सय बिघामा उखु खेती भएकोमा रिलान्यस सुगर मिलले बल्लतल्ल ५ सय बिघाको उखु खरिद गरेको थियो भने करिब १ सय बिघा खेतको उखुको कडा सङ्घर्षपछि तोकिएको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो। यस पाली भने पर्सा जिल्लामा १३६३ बिघामा उखु खेती गरिएको थियो । गत वर्षझैं यस वर्ष पनि रिलान्यस सुगर मिलले उखु खरिद गर्न ढिला गरेपछि पर्साका किसान आन्दोलित भएका थिए । यसैबीच भारतीय महावाणिज्य दुतावासको पहलमा सीमावर्ती भारतीय चिनी मिलहरूले उखु खरिद गर्ने वातावरण सृजना गरेपछि किसानहरू गत वर्षको दुर्दशा बेहोर्नु नपर्ने कुरामा ढुक्क भएका छन् । रिलान्यस सुगर
गढीमाई नगरपालिकाद्वारा पथलैया ट्राफिकलाई सहयोग
प्रस, जीतपुर, १४ फागृुन/ सवारी दुर्घटना नियन्त्रण तथा जनचेतनामूलक सड्ढेतपाटी गढीमाई नगरपालिका कार्यालय जीतपुरका कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद चापागार्इंले मध्य क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाका प्रमुख ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षक उमेश रन्जितकारलाई एक समारोहबीच आज हस्तान्तरण गरेको ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक अभय विक्रम शाहले बताए । उपलब्ध सूचनापाटीले सवारी दुर्घटना तथा यस भेगका सरोकारवालाहरूलाई समुचित शिक्षा दिने ट्राफिक प्रमुख उमेश रन्जितकारले बताएका छन् ।
वीरगंज जेसिजको आयोजनामा पलिस्था ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता
प्रस, वीरगंज, १४ फागुन / वीरगंज जेसीजको आयोजनामा आजदेखि वीरगंजमा विद्यालयस्तरीय तीन दिने पलिस्था स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता शुरु भएको छ । वीरगंजको कभर्ड हलमा आज ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक दिवेश लोहनीले उद्घाटन गरे । वीरगंज जेसीजका अध्यक्ष अशोक गुप्ताको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रममा र स्वर्गीय पलिस्थाका पिता प्रवीण मानन्धर, पत्रकार महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष श्याम बन्जारा, वीरगंज जेसीजका संस्थापक अध्यक्ष पशुपति विक्रम शाह, पूर्व अध्यक्षहरू विमल अधिकारी, निशान्त लामिछाने, सन्तोष खनाल, अमित श्रेष्ठ, गणेशमान सिंह, मोहन प्रधान, अमित श्रेष्ठ, रेडक्रस पर्साका उपाध्यक्ष मधु राणालगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा रोशनी श्रेष्ठले स्वागत र राजेश पटेलले सहजीकरण गरेका थिए । आज उद्घाटन खेलमा केटातर्फ एकलमा कञ्चनजङ्घा, मास्कोट, चिल्ड्रेन वल्र्ड, कादम्बरी, ज्ञानज्योति, माउन्ट एडमन्ड र विद्यासदनका छात्र विजयी भए । केटीतर्फ एकलमा न्यु वेभ, मास्कोट, कञ्चनजङ्घा, गौत्तम, कादम्बरी, ज्ञानज्योति र पिसजोनका छात्रा विजयी भएका थिए । मिक्स डबलमा कञ्चनजङ्घा
नेपालमा प्रजातन्त्रको विकास किन सुस्त भयो ?
विश्वराज अधिकारी एसियाली मुलुकहरूमा संस्थागत रूपमा राजनैतिक पद्धतिको विकास हुनु अगाडि नै युरोपेली मुलुकहरूमा संस्थागत रूपमा राजनैतिक पद्धतिको विकास मात्र होइन, प्रजातन्त्रको विकास एवं अभ्यास समेत भएको पाइन्छ । यस अर्थमा आम नागरिकमा राजनैतिक चेतनाको विकास, नागरिक हक एवं कर्तव्यको ज्ञान एवं राज्यको नागरिकप्रति कर्तव्य र दायित्वजस्ता विषयहरूको बोध पनि युरोपेली मुलुकका नागरिकहरूमा एसियाली मुलुकका नागरिकहरूभन्दा धेरै पहिले नै आएको देखिन्छ । हुनत ऐतिहासिक घटनाहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने एसिया र युरोप दुवैतिरका राष्ट्रहरूमा राज्यको शासन व्यवस्थामा राजा–महाराजाहरूको बलियो पकड रहेको देखिन्छ । यी दुवै क्षेत्रहरूमा राजकीय शासन व्यवस्थामा राजसंस्थाले बलियो जरा गाडेको पाइन्छ । तर युरोपमा भने नागरिकहरूले क्रमिक रूपमा राज्यको शासन व्यवस्थामा राजा महाराजाहरूलाई सामान्य नागरिकद्वारा विस्थापित गर्दै लगे वा राजा महाराजाहरूको राजकीय अधिकार कटौती एवं नियन्त्रित गर्दै गए । तर अर्कोतिर जुन समयमा युरोपका राष्ट्रहरूमा राष्ट्रको शासन व्यवस्थाबाट राजा–महाराजाहरूको बहिर्गमन वा उनीहरू शक्तिहीन हुँदै थिए, जति
विकासका लागि साझा एजेन्डा
शीतल महतो आखिर जे नहुनुपर्ने थियो, त्यही भयो । दलीय हठ, सत्ता सङ्घर्ष र अदूरदर्शिताका कारण नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाएर समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण गर्न पाउने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गर्नबाट चुकेको छ । धेरै विषयमा सहमति भएर पनि विशेषगरी राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा परेको गाँठो फुकाउन नसक्दा राजनीतिक दलहरूले आफैंले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप माघ ८ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउन सकेनन् । फलस्वरूप यतिखेर समग्र मुलुक राजनीतिक जटिलताको एउटा मोडमा उभिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक सङ्क्रमणबीच मुलुक गुज्रिरहेको अहिलेको अवस्थामा दलहरूले आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको बाटो अवलम्बन गर्न नसक्दा यस वर्ष पनि दरिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिंदैन भन्ने चिन्ता सबैतिर छाएको छ । कुनै पनि मुलुकमा आर्थिक सबलतालाई स्तरीय सामाजिक जीवनको मूल आधार मानिएको हुन्छ । जबसम्म आर्थिक गतिविधि बढ्दैन, पूँजी निर्माण असम्भव हुन्छ र पूँजी निर्माण नभएपछि राष्ट्र समृद्धतातिर होइन, अधोगतितिर लाग्छ । अहिलेसम्म पनि नेपालमा पूँजीवादको राम्रो विकास भइसकेको छैन र त्यसका संरचनाहरू पनि
स्थानीयस्तरमा आर्थिक विकास र सङ्घीयता
वीरेन्द्र यादव । संविधान जारी गर्ने तिथि जति नजिक आउँदैछ, त्यति नै अन्योल र निराशा थपिदैछ । मुलुकको मूल उद्देश्य रहेको सङ्घीयता अनिश्चित हुँदैछ । स्थानीय जनताले सङ्घीयतामार्फत् पाउने आर्थिक एवं संवैधानिक अधिकारको ठूलो अपेक्षा राखे पनि केन्द्रीकृत मानसिकताले त्यसलाई ओझेलमा पारेको छ । जुन निकै चिन्ताजनक अवस्था हो । २०५२ सालदेखिकै राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वले मुलुक आर्थिकरूपले धराशायी बन्दै गएको छ भने भ्रष्टाचारले पनि गाँजिदै गएको छ । मुलुकको अस्तित्व जोगाउने तथा अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको जनसङ्ख्यासमेत घट्दै गएको जनगणना २०६८ को परिणामले देखाएको छ । तथ्याड्ढले जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धिदर १.३५ देखाएको छ । यसबाट २०५८ दखि २०६८ सम्म प्रतिवर्ष प्रतिहजार लगभग १४ जना मानिस थपिएको मान्नुपर्छ । २०५८ साल अघिको जनगणनामा यो अनुपात २५ थियो । दश वर्षमा जनसङ्ख्या घट्नुमा परिवार नियोजनको कार्यक्रम, वैधानिक गर्भपतन लगायत कारण भए पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण युवा जनशक्ति विदेशमा पलायन हुनु पनि हो । २०५२ सालदेखि उत्पादक जनशक्ति बाहिरिएको बाहिरियै छ । प्रतिवेदनमार्फत १९ लाख २१ हजार ४
भारतको आर्थिक वृद्धिको चुनौती
ई. गोपाल श्रेष्ठ तथ्याड्ढले देखाए अनुसार विश्वमा कुल १ अर्ब ३० करोड मानिस गरिब रहेकोमा ५० करोड दक्षिण एसियामा छन् । दक्षिण एसियामा भारत सबैभन्दा ठूलो र धेरै जनसङ्ख्या भएको देश भएकोले भारतले आफ्नो वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर बढाई गरिबको सङ्ख्या घटाउन अथक प्रयास गर्‍यो । परिणाम सन् २००३ देखि सन् २०१० सम्म भारतको वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर १० प्रतिशतभन्दा बढी नै रहयो । यो बढ्दो वृद्धि दरले भारतको गरिबी ४१.६ प्रतिशतबाट घटेर ३२.७ प्रतिशत पुग्यो । दुर्भाग्यवश सन् २०११ देखि पुन: यो वृद्धि दर ५ प्रतिशतमा थच्चिन पुग्यो । वृद्धि दरमा अप्रत्याशित र्‍हास आएको यस तथ्याड्ढले भारतलाई चिन्तित बनायो । आर्थिक वृद्धि दर नबढाई गरिबी घटाउन सकिंदैन भनेर नै होला भारतीय जनताले भाजपाका नरेन्द्र मोदीलाई आफ्नो देशको बागडोर सम्हाल्न प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्‍यो । वार्षिक आर्थिक दर वृद्धि गर्न वैदेशिक लगानी अवश्य चाहिन्छ । यो लगानीलाई आकर्षित गर्न ध्यचमि द्यबलप को भ्बकभ या म्यष्लन द्यगकष्लभकक च्भउयचत पोजिटिभ हुनुपर्छ । यो रिपोर्ट अनुसार, १८९ देशमध्ये भारतको स्थान १४२ छ, जुन एकदम नेगेटिभ छ । अहिले भारत सरकारले
सेवा केन्द्रको राजनीति
श्रीमन्नारायण विगत एक वर्षदेखिको सुगा रटाइका बावजुद वर्तमान सरकारले संविधान जारी गर्न सकेन । आफ्नो यस ठूलो असफलतालाई ढाकछोप गर्न सरकार तथा सत्ताधारी दलले सेवा केन्द्रको राजनीति अघि सारेको छ । सत्ताधारी दलका नेताहरू अब काठमाडौंको द्वन्द्वलाई विकेन्द्रित गर्न चाहन्छन् । सेवा केन्द्रको स्थापना यसैको सड्ढेत हो । सैद्धान्तिकरूपमा देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भइसकेको तथा सङ्घीय संरचनाबारे गहन छलफल चलिरहेको अवस्थामा धमाधम नगरपालिका घोषणा गर्नु तथा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुले सत्ताधारी दलको नियत जनतालाई सुलभ एवं सस्तो सेवा प्रदान गर्नुभन्दा पनि बलिरहेको आगो ताप्नु अथवा रमिते भएर तमाशा हेर्न चाहनु हो भन्ने कुरा साबित भएको छ । कुनै पनि सरकारको मुख्य दायित्व एवं कर्तव्य भनेको जनतालाई छिटो–छरितो सेवा सुविधा प्रदान गर्नु हो । विगतका दिनमा इलाका प्रशासन कार्यालयको स्थापना पनि नभएको होइन । यसबाट जनताले पायक ठाउँबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँदै आएका छन् । यद्यपि इलाका प्रशासन कार्यालयलाई सबैखालको महत्त्वपूर्ण निर्णय दिने अधिकार प्राप्त छैन तर पनि जनताका कतिपय समस्य
“शिक्षक र चिकित्सकको कुनै जात वा वर्ग हुँदैन । यी दुवै पेशा त धर्म हुन्” राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले रौतहटको एक कार्यक्रममा भने । दुवै पेशासँग सम्बन्धित विषय तथा पदलाई दलीय भागबन्डामा नराखी स्वतन्त्र र निष्पक्ष तथा हस्तक्षेपरहित तरिकाले अगाडि बढ्न दिनुपर्ने राष्ट्रपतिको विचार थियो । यी दुई क्षेत्रलाई मात्र पनि निष्कलड्ढरूपमा राख्न सके समाजले धेरै राहत पाउने उनको तर्क थियो । समाज विकासको मुख्य आधार शिक्षा नै हो । शिक्षित समाज र अल्पशिक्षित एवं अशिक्षित समाजबीच विकासको गति सहजै छुटयाउन सकिन्छ । शिक्षाले कुनै पनि मुलुकको शासन–प्रशासनको लोकतन्त्रीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । शिक्षित जनताको अगाडि तानाशाह पनि झुकेका छन् । यस्तो महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिने शिक्षक समाजका गुरु हुन् । यस सब्दको विशिष्ट महत्त्व छ । आफ्ना विद्यार्थी तथा चेलाचेलीको उन्नति, प्रगतिमा गुरु खुशी हुन्छन् । जसरी आफ्नो सन्तानको उन्नति र प्रगतिमा आमा खुशी हुन्छिन् । आमाले आफ्ना सबै सन्तानलाई बराबर माया गर्छिन् । त्यस्तै शिक्षक अर्थात् गुरुले आफ्ना सबै चेलाचेलीहरूको लागि निष्पक्ष र बराबर ज्ञान बाँटिरहेका हुन्
शिक्षा क्षेत्रलाई भागबन्डाभन्दा माथि राख्नुस् : राष्ट्रपति डा. यादव
प्रस, गरुडा, १३ फागुन/ शिक्षा क्षेत्रलाई भागबन्डाभन्दा माथि राख्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आग्रह गरेका छन् । रौतहटको चन्द्रपुर १४ नजरपुरस्थित श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिले निर्माण गरेको वृद्धाश्रमको उद्घाटन समारोहलाई बुधवार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति डा. यादवले शिक्षा क्षेत्रको भागबन्डाले मुलुकको भविष्य सड्ढटमा पर्ने बताए । “शिक्षक र डाक्टरको वर्ग हुँदैन, जात हुँदैन”–डा. यादवले भने–“शिक्षा धर्म हो ।” राष्ट्रपति डा. यादवले शिक्षा नरहे राष्ट्र बन्न नसक्ने हुनाले शैक्षिक क्षेत्रमा कुनै किसिमको भागबन्डा नगर्न आग्रह गरेका हुन् । संवैधानिक निकायहरूमा पनि दलहरूबीच भागबन्डाको कुरा सञ्चारमाध्यममा आइरहेकोले त्यसतर्फ सड्ढेत गर्दै त्यसो नगर्न उनले आग्रह गरे । राष्ट्रपति डा. यादवले चाँडोभन्दा चाँडो सहमतिको संविधान आउने कामना समेत गरे । आफ्नो कामनामा साथ दिन रौतहटवासीलाई राष्ट्रपतिले आग्रहसमेत गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रपति डा. यादवले राष्ट्रको सर्वोत्तम हितमा सहमतिको संविधान जारी हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै सहमतिको लागि काङ्ग्ेरस र एमालेको मुख्य पहल हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर
शुक्रवारदेखि सीमामा स्वाइनफ्लु हेल्पडेक्स
प्रस, वीरगंज, १३ फागुन/ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको अगुवाइमा शुक्रवारदेखि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा स्वाइनफ्लु हेल्पडेस्क राखिने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा हिजो अबेर बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको निमित्त प्रजिअ योगराज पाण्डेले बताए । छिमेकी मुलुक भारतमा स्वाइन फ्लु देखिएपछि नेपालमा पनि त्यसको केही बिरामीहरू निगरानीमा उपचार भइरहेको कारण देशभरि खतरा बढेको कारण सीमामा हेल्पडेस्क राखिने निमित्त प्रजिअ पाण्डेले बताए । होलीको अवसरमा भारतबाट काम गरेर नेपाल फर्किनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको तथा देशको मुख्यद्वार वीरगंज रहेको कारण हेल्पडेस्कको आवश्यकता रहेको पाण्डेले बताए । स्वाइनफ्लु लागेका बिरामीको परीक्षण वीरगंजमा हुन नसक्ने भएकोले प्रारम्भिक अनुसन्धानको आधारमा रोगीलाई आफ्नो निगरानीमा राखी उपचार गर्ने तथा शड्ढास्पद रोगीको र्‍याल परीक्षणको लागि काठमाडौं पठाउन इक्युमेन्टसमेत उपलब्ध भइसकेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, पर्साका प्रमुख अरुण महतोले बताए । भारतबाट नेपाल आउने सबै व्यक्तिलाई सीमामा रोकी प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने क्रममा शड्ढास्पद बिरामी
जनकल्याणकारी क्लब बकुलिया विजयी
प्रस, वीरगंज, १३ फागुनर ६५ औं प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सगरमाथा युवा क्लब बगहीद्वारा आयोजित नकआउट फूटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधवारदेखि सेमिफाइनल खेल शुरु भयो । पहिलो सेमिफाइनल खेलमा जनकल्याणकारी क्लब बकुलिया बारा, विजयी भएको छ । एएफसी पोतला क्लब हेटौंडा र जनकल्याणकारी क्लब बकुलियाबीच भएको खेलमा १ को विरुद्ध २ गोल गरी बकुलिया विजयी भएको हो । खेलको १५ औं मिनेटमा पोतलाका जर्सी नं। ७ का अमीर श्रेष्ठले १ गोल गरेका थिए। सोको प्रतिउत्तरमा बकुलियाका जर्सी नं। १० का खेलाडी कुमार दोङले खेलको २६ औं मिनेटमा पोतलाविरुद्ध गोल प्रहार गरे । त्यसैगरी दोस्रो हाफको ४२ औं मिनेटमा बकुलियाकै जर्सी नं। ९ का रामकुमार कुम्हालले १ गोल गरी आफ्नो टिमलाई जिताएको आयोजक समितिका संयोजक जयनारायण सिंहले बताएका छन् । बिहीवार हुने अन्तिम सेमिफाइनल खेल निजगढ युवा क्लब बारा र सशस्त्र रुद्रवाहिनी बाराबीच भीडन्त हुने पर्सा एथलेटिक्स स्वयंसेवक प्रशिक्षक विश्वेश्वर पटेलले जानकारी गराएका छन् । आजको खेलको निर्णायक अर्जुन गुप्ता साथै सहनिर्णायक ग्रीष्म शाक्य र सदाशड्ढर पटेल रहेका थिए ।
जो समाजलाई केही दिन चाहन्छ
सञ्जय साह ‘मित्र’ समाजमा सबै किसिमका मानिस छन्, हुनु पनि पर्छ । समाजमा विभिन्नता भएन भने विभिन्न किसिमको विचार पनि आउँदैन । जहाँ विभिन्न किसिमको विचारको अभाव हुन्छ, त्यहाँको मानिस कुनै उत्पादनजस्तो हुन पुग्दछ होला । के देखिएको छ भने विविधताले विकासलाई गति दिएको छ र एकात्मकताले प्रगतिको गतिलाई कमजोर बनाएको छ । संसारका जुनसुकै कुनाको भूगोल हेर्ने हो भने यो स्पष्ट हुन्छ कि जहाँ कुनै एक जाति, एक समुदाय वा धर्मका मानिसको मात्रै बसोवास छ, त्यो समाजले तुलनात्मकरूपमा विकासको गति कमजोर बनाएको छ । आधुनिकतालाई वरण गर्न र आफूमा निरन्तर प्रगतिको अनुभूति गर्न त समाजले आफूमा विविधता ल्याउनै पर्छ । वैचारिक विविधताले गर्दा समाजमा वैचारिक बहस हुन्छ, वैचारिक बहसको खुलापनले जीवनमा गतिशीलता ल्याउँछ तर पोखरीको पानीजस्तो जमेर बस्ने समाजमा नयाँ कुरा आउँदा पहिले नकारात्मक तरङ्ग उत्पन्न हुन्छ र नकारात्मक तरङ्गले सन्तुलन ल्याउँदासम्म अन्य समाज झन् केही अगाडि बढेको हुन्छ । पोखरीको पानीजस्तो जमेको समाजमा केही गरी नयाँ विचारको प्रवेश हुन्छ भने त्यहाँ द्वन्द्वको शुरुआत हुन्छ र कहिलेकाहीं यस किसिमको द्वन्द्वले
आश्रित रहने मनोवृत्ति
सरकार र नागरिकको सम्बन्ध स्वेच्छिक सहयोगमा निर्भर भयो भने समाजमा स्वर्गको वातावरण देखिन्छ, अन्यथा सधैं कलह र दोषरोपणको विषवृक्ष मात्र मौलाइरहन्छ । आजको नागरिकको गुनासो सरकार वा स्थानीय निकायले यसो गरिदिएन, उसो गरिदिएन भन्ने रहेको छ भने सरकारीतन्त्रलाई सधैं नागरिकसँग गुनासो रहन्छ–नागरिकको सहयोग प्राप्त हुने हो भने समाजबाट विकृति–विस·ति हट्न सक्छ, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सघाउ पुग्छ, सरसफाइको अपेक्षित परिणाम निस्कन्छ आदि । तर कुनै एकको समस्यामा अर्कोको ध्यान विवश नपारेसम्म जाँदैन । एउटा नागरिक आफू फोहरमा बसेको कुराको गुनासो गर्दछ, सम्बद्ध निकायले सो काम नगरिदिएकोमा दु:खी हुन्छस हुन सक्दछ फोहर व्यवस्थापन एउटा व्यक्तिको सामथ्र्यभन्दा बाहिर होला, तर प्राय: आफैंले गर्न सक्ने वा गराउन सक्ने यस्तो कामका लागि पनि आश्रित हुनु नागरिकको अकर्मण्यता वा छिद्रान्वेषी चरित्र नै हो । त्यसैगरी सरकारले आँखा अघिल्तिरको नागरिकको समस्याबारे जबसम्म उजुरी पर्दैन, वास्ता गर्दैन र अधिकांश मुद्दामा त उजुरी होइन, कडा दबाब नपरी पाइला चाल्दैन । पोखरिया गाविसमा केही मानिसको जग्गा, विभिन्न ठाउँबाट पानी आएर जम
२०७१ फागुन १३ गते बुधवार
२०७१ फागुन १३ गते बुधवार को प्रतीक दैनिक पढ्नुहोस
सडक आन्दोलन स्थगनसँगै सिमराको जनजीवन सामान्य, अबको आन्दोलन बालुवाटारमा हुन्छ
प्रस पथलैया, १२ फागुन/ मालपोत र नापी कार्यालयको थप सेवा केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन माग गर्दै आन्दोलनरत सिमरा क्षेत्रका स्थानीयले आम हडताल र राजमार्ग चक्काजाम स्थगन गरेका छन् । मालपोत कार्यालय सिमरामा स्थापना सरोकार समिति गठन गरेर सेवा केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन माग गर्दै नौ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रेका स्थानीयले सडक सङ्घर्ष छाड्ने निर्णय गरेका हुन् । दुई दिनसम्म लगातार भएको झडपले आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि जनधनको क्षति देखेर समितिले सडक सङ्घर्ष छाडेर अन्य प्रक्रियाबाट माग पूरा गराउन राज्यलाई दबाब दिने समितिको भनाइ छ । समितिले म·लवार सिमरामा पत्रकार सम्मेलन गरी आम हडताल र राजमार्ग चक्काजाम स्थगन गरेको जानकारी दिएको छ । सरकारले वार्ताका लागि आग्रह गरिरहेको अवस्थामा आन्दोलन लम्ब्याएर थप हिंसात्मक बनाउन नहुने समितिको संयोजक भोला अधिकारीले बताए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा राज्यबाट भएको दमनको भत्र्सना गर्दै अधिकारीले अब डेलिगेशन गएर राज्यलाई दबाब दिने बताए । उनले आन्दोलन स्थगित भएको नभई स्वरूप मात्र परिवर्तन गरिएको बताए । नौ दिनदेखि जारी आन्दोलन पछिल्लो दुई
सिमरा विमानस्थलमा रात्रि उडान शुरु
प्रस, जीतपुर, १२ फागुन/ १२ वर्षको प्रयास तथा ५ वर्षको प्रतीक्षापश्चात्, नेपाली भूमिमा पहिलोपटक जहाज अवतरण भएको सिमरामा रात्रि उडान शुरु गर्ने तयारी पूरा भएको सिमरा विमानस्थल कार्यालय सिमराका प्रमुख परवेज आलम सिद्दीकीले आज प्रतीकलाई बताए । नेपाली भूमिमा पहिलोपटक ‘पुष्मथ’ नामक जहाज रक्सौल (भारत) बाट ई.स १९४२ अगस्त २५ तारिखको दिन सिमराको काम चलाउ विमानस्थलमा ओर्लेको थियो । त्यो व्यावसायिक सेवा नभएर ‘भारत छोडो’ आन्दोलन ताका नेपालको विश्वसँग सम्पर्क टुटेपछि जुद्ध शम्शेरको आग्रहमा ब्रिटिश भारत सरकारले अवतरण गराएको भारतीय विद्यार्थी सङ्घ रक्सौलका छात्र तथा सिमराका संस्थापक सदस्य देवनाथ उपाध्यायले बताएका छन् । यही मार्च १ तारिखदेखि काठमाडौं–सिमरा रात्रि उडानतालिका बुद्ध एयरले सार्वजनिक गरेको छ । अहिले काठमाडौंबाट बेलुका ६ बजे सिमराको लागि उडान गर्ने र सोही दिन ६:२० बजे सिमराबाट काठमाडौं फिर्ता हुने कार्यक्रम छ । यो कार्यतालिका दैनिक कायम रहन्छ र यात्रीहरूको वृद्धि तथा माग बमोजिम उडान सेवा थप गर्दै जाने बुद्ध एयर टिकट काउन्टर सिमराका प्रमुख कौशल भण्डारीले प्रतीकलाई बताएका छन् ।
प्रस, वीरगंज, १२ फागुन/ ६५ औं प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा पर्साको बगहीमा सगरमाथा युवा क्लबद्वारा आयोजित नकआउट फूटबल प्रतियोगिताको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा नवदुर्गा युवा क्लब सिमरालाई पराजित गर्दै रुद्रवाहिनी पथलैया सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । टाइब्रेकरमा ४ का विरुद्ध ५ गोल गरी रुद्रवाहीनी सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको एथलेटिक्सका स्वयंसेवक प्रशिक्षक विश्वेश्वर पटेलले बताए । भोलिको पहिलो सेमिफाइनल खेल एलसी पोताला क्लब मकवानपुर र जनकल्याणकारी क्लब बकुलियाबीच हुने आयोजक कमिटिका संयोजक जयनारायण सिंहले जानकारी गराएका छन् ।